Weeraryahanka kooxda Juventus iyo xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan kubada cagta wuxuuna dhaafay rikoorkii uu dhigay halyeeyga reer Brazil Pele.
Ronaldo ayaa ka caawiyay kooxdiisa inay 4-1 kaga badiso Udinese ciyaar ka dhacday Allianz Stadium iyadoo labada gool uu dhaliyay qeybtii hore.
Cristiano ayaa dhaliyay goolkiisii ​​757-aad iyo 758-aad ee xilli ciyaareedkan si uu booskaas ugu sii jiro.
Pele wuxuu dhaliyay 757 gool waayihiisa ciyaareed markii uu u ciyaarayay Santos, New York Cosmos iyo Brazil intii u dhaxeysay 1956 iyo 1977 laakiin haatan wuxuu u dhacay kaalinta seddexaad ee ciyaaryahanka ugu goolasha badan kubada cagta.
Lama rumaysan karo, Cristiano ayaa kaliya hal gool ka hooseeya gooldhaliyaha ugu sarreeya kubada cagta Josef Bican oo leh 759 gool.
Ronaldo wuxuu awooday inuu barbareeyo rikoorka Bican markii Bianconeri ay booqatay AC Milan Arbacadii kulan muhim ahaa oo difaacooda Serie A ah.
Juventus ayaa 10-dhibcood ka hooseysa kooxda hogaanka heysa ee AC Milan oo kulan baaqi u yahay, guul ay ka gaaraan kulankaas ayaa soo nooleyn doonta rajadooda ku aadan ku guuleysiga Serie A markii 10-aad oo xiriir ah.
Ronaldo ayaa haatan leh 656 gool oo heer kooxeed ah tan iyo xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee Sporting Lisbon sanadkii 2002, waana goolasha ugu badan ee uu u dhaliyay ciyaaryahan kasta oo Real Madrid ah.
Ugu dambeyntiina, Lionel Messi ayaa aad uga dambeeya rikoorka Ronaldo ee 742 gool 200 kulan oo uu ciyaaray wax kayar CR7.
Mareykanka ayaa Dib u celiyay USS Nimitz